अरुण राज सुमार्गी– यो महामारीबाट सीधै मारमा परेकाहरूका बारेमा भन्दा धन्दा गर्ने विभिन्न कारोबारीहरूको बोलवालाको संरक्षणमा समय खर्चने अर्थतन्त्रको बाटोलाई त्याग्नु जरुरी छ । विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै धरमराई–धरमराई चलेको अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ ले अर्को बज्रपात निम्त्याएको छ । सानो आकारको अर्थतन्त्र भए पनि बडो जटिल र...
काठमाडौ । हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तरसरकारी संस्था इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री डा मणी नेपालले मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रबृत्ती बदल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विश्वब्यापी ऊर्जा खपतको प्रबृत्तीसँग नेपालको तालमेल नभएको बताए । अत्यधिक प्रदुषण गर्ने र तीव्र वन फँडानीमा सघाउने बायोमास (दाउरालगायत) को उपयोग...
अरुण राज सुमार्गी– नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको अवधारणालाई आत्मसात् गरी भूमि बैंकको सोच स्थापित गर्नु आजको हाम्रो आवश्यकता हो । देशको अर्थतन्त्र पहिले पनि सही बाटोमा लाग्न नसकिरहेका बेला यो १० वर्ष अझ कठिन मोडहरूबाट गुज्रिएको छ । गणतन्त्रपछिको दुईवटा संविधान बनाउन भएको निर्वाचन विकास योजनाहरूमा पूर्ण रूपमा लगानी लगाउन नपाउनुको...
अरुण राज सुमार्गी– काठमाडौं । नेपालको कच्चापदार्थ र छिमेकी मुलुकको बजारलाई ध्यानमा राखी विशेष प्याकेजसहित उत्पादनमा जानुपर्ने बेला हामी आन्तरिक समस्यामै छौं । नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि सोच र दृष्टिकोणले के हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल र आत्मनिर्भरका लागि सघाउने नीतितर्फ अग्रसर भएका छौं ? यस्ता प्रश्नहरूको बीचमा म सधैं...
अरुणराज सुमार्गी– नेपालको भू–बनोट कठिन खालको भएकाले पनि सिँचाइ सुविधा, लिफ्टिङ सिँचाइ वा नहरबाट गरिने सिँचाइ हाम्रो लागि पर्याप्त हुन सकेको छैन । नेपालको कृषिको ७० वर्षलाई सरसर्ती हेर्दा हामी हिजोको ठाउँबाट माथि हैन, तलतिर खसेको देखिन्छ । कुनै बेला कोरियाजस्तो देशलाई धान र चामल सहयोग गर्ने हाम्रो देश आज हाम्रो आवश्यकता नै पूरा गर्न...
भक्तपुर, साउन १५ । लागूऔषध मुद्दाका फरार प्रतिवादी भक्तपुर नगरपालिका २ ब्यासी बस्ने २५ वर्षीय किरण ब्यान्जुलाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला अदालत भक्तपुरको २०७४ चैत १८ गतेको फैसलाले १ वर्ष ९ महिना २६ दिन कैद र १ लाख १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना फैसला भई फरार रहेका उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरीले...
अरुणराज सुमार्गी- निषेधित लगानीसम्बन्धी सिद्धान्तलाई टेकेर राज्यले ३० को दशकमा ल्याएको नीतिभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा कृषिको हालत देखिन आएको छ । आजको यो विषम परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर हरेकको चिन्ता देखिन्छ । एकपल्ट देशको इतिहासमा ल्याइएका मौद्रिक नीतिहरूलाई हेर्नु जरुरी छ । कुरो २०३० सालको हो,...
अरुण राज सुमार्गी, कठमाडौं । आर्थिक विकास, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र बजारीकरणका बारेमा धेरै मन्त्रालय र विभागहरूको समन्वयमा नयाँ कार्यको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ । शताब्दीकै संकटकालका रूपमा आएको कोरोना भाइरस, यसले निम्त्याएको आर्थिक मन्दी र यसपछिको आर्थिक सुधारका पक्षहरूमा हामीले नेपालमा चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा बहस गर्नु...
अरुणराज सुमार्गी, काठमाडौं । विश्वभरि कोभिडले आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ । यसले गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि ठूलै आर्थिक मार खेप्नुपरेको छ, नेपालको सानो बजार र यो बजारलाई चलायमान बनाउने नेपाली व्यवसायीहरूलाई कस्तोसम्म अवस्था आयो होला ? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हिजोआज प्रायःजसो सामाजिक सञ्जाल तथा रेडियो वा छापा...
अरुणराज सुमार्गी काठमाडौं । घर आफ्नै हो, कोठा आफ्नै हो, सब आफ्नै हो । अनि किन हामी भित्र बस्दा आराम वा चैन लिन सकीरहेका छैनौ ? यो अहम प्रश्न हामीले हामीलाई नै गर्ने बेला आएको छ । आफुले वा आफ्नाले मेहनत गरेर बनाएको घर बहाल कोठा वा बस्ने ठाउँ आफ्नो हो भन्ने थाहा हुदाँहुदाँ पनि किन हामी हाम्रो घर भित्र सुरक्षाको लागि बस्न सकिरहेको छैनौ ? आमा ...
मुरारी ढुंगेल, भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा कहिले हिमपात, कहिले बैंकमा लुटपाट त कहिले कोरोना भाइरसले सन्त्रास फैलाएको छ । जतिसक्दो धेरै पर्यटकलाई स्वागत गरिनुपर्ने बेलामा आएका पाहुनाले कोरोना पो ल्याएकी भनी परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भाइरस भित्रिने डरले उत्तरी नाका नै केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पर्यटन...
ललितपुर, माघ १० । महालक्ष्मी नगरपालिका १ ईमाडोल डेरा गरी बस्ने झापा पृथ्वीनगर घर भएका २५ वर्षीय संजोक लिम्बुलाई नियन्त्रित लागूऔषध डाईजेपाम ७४ एम्पुल, नुर्फिन ५८ एम्पुल र फेनारगन ७४ एम्पुल सहित बुधबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लिम्बुले अवैध लागूऔषधको कारोवार गर्दै आएको भन्ने सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरबाट...
काठमाडौँ । बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत भक्तपुरले प्रसाईलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरमा प्रसाईविरुद्ध अभद्र व्यवहारमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीअनुसार अदालतले गिरीलाई...
–मुरारी ढुंगेल, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु भएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले राजधानीहरूमा निकै भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर भ्रमण वर्ष उद्घाटन गरे । पर्यटन विकासले छिटो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । नेपाल विकासको पहिलो आधार भनेकै पर्यटन हो । विश्वभर कहीँ कतै नभेटिने प्रकारका हिमशृंखलादेखि ताल तलैया, पहाड तथा पर्यटक...
शिव अधिकारी काठमाडौं– यो देश धेरै खाले अनौठा घटना घटिरहने भट्टी बनेको छ । चारैतिर यस्ता भट्टीहरु चलिरहेका पाइन्छन् । यसै क्रममा निरन्तर विवादको चंगुलमा फसिरहनुपर्ने ठाउँ भने न्यायालय नै बनेको छ । यो भनिरहँदा अन्यथा नहोस तर, न्यायालय वास्तविक गरिमामय स्थानबाट धेरै तल झरिसकेको अवस्था देखा परिरहनुले पनि देशकै दुर्दशा निम्त्याईरहेको हो...